ကိုဗဈတတိယလှိုငျးကွောငျ့ သူမနဲ့ သူမရဲ့မိသားစုဝငျတှအေားလုံးခံစားနရေတဲ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနကေိုပွောပွလာတဲ့ ဖွူဖွူထှေး – Shwe Yaung News
နိုငျငံရေးမ တညျငွိမျနတေဲ့ အခြိနျကာလအတှငျးမှာတော့ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ တိတျဆိတျငွိမျသကျနခေဲ့ပွနျပါတယျ. .. အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားလညျး တရားသောဘကျနှငျ့ မတရားသောဘကျကို လူသားခငျြးသိတတျစှာဖွငျ့ သိတတျခဲ့ကွပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူရပျတညျခဲ့ကွပမေဲ့ အဲထဲမှာ ဖွူဖွူထှေးကတော့ တိတျဆိတျနခေဲ့ပွနျ
ပါတယျ။မကွာမှီရကျတဈရကျမှာတော့ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ ပွညျသူတှအေတှကျ အအေးဗူးတှေ ထှကျပွီးကမျးလှမျးခဲ့ပမေဲ့ ပရိသတျတှကေတော့သူမအပျေါမှာ ခဈြတဲ့အခဈြတှအေစား ဝဖေနျမှုတှသော တိုးနခေဲ့ပွနျပါတယျ။
ဝဖေနျမှုတှေ ခံနရေငျးနဲ့ပဲ ရနျကုနျမှာဆကျလကျနထေိုငျရငျး မ ကွာခငျမှာတော့ သူမတို့နထေိုငျတဲ့ နယျကိုပဲ ပွနျတော့မယျဆိုပွီး ပွနျသှားပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ အားလုံးကို လှမျးနတေယျဆိုတဲ့အကွောငျးတှကေလညျး တငျလာခဲ့ပွီးနောကျ အလှူအတနျးဆို ရကျရောတတျတဲ့ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျကတော့ သူမ တတျနိုငျသလောကျ လှူဒါနျးမှုလေးတှတေော့
အမွဲပွုလုပျလကျြရှိပါ တယျ။ သူက တော့ ဒါတှကေိုဂရုမစိုကျပဲ ထောကျပံ့မှုတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ယခု ဆိုရငျ လဲ မွနျမာပွညျမှာ ကိုဗဈ ရောဂါ မြား ဖွဈပှားနပွေီး အနုပညာ တျောတျောမြားမြားလဲ ကိုဗဈ ကူးစကျခံနရေတာ ဖွဈပါတယျ။
ဖွူဖွူထှေး ဟာ ဆိုရငျလဲ သူ ကိုဗဈကူးဆကျ ခံ နရေကွောငျး ပရိတျသတျတှကေို ပွောပွလာပါတယျ။ဘယျတုနျးက ကူးစကျခဲ့ပွီး ဘယျလောကျကွာပီ ဆိုတာကတော့ မပွောပွခဲ့ပါဘူး။မွနျမာ ပွညျတှငျးနထေိုငျကွတော့မိဘပွညျသူ မြားလဲ ကိုဗဈရောဂါ ဆိုးကွီးက နေ အမွနျဆုံးကငျးဝေးကွပါစလေို့ ပရိသတျကွီးနဲ့အတူ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကြောင့် သူမနဲ့ သူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဖြူဖြူထွေးကတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးပြီးပရိသတ်အချစ်တွေကို ရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. . ဖြူဖြူထွေးကတော့ မိသားစုလိုက် ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းတွေနဲ့အတူ အလှူအတန်းတေ့လည်း ရက်ရောတယ်ဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်များကလည်း ချစ်ပေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမ တည်ငြိမ်နေတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်. .. အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း တရားသောဘက်နှင့် မတရားသောဘက်ကို လူသားချင်းသိတတ်စွာဖြင့် သိတတ်ခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့ကြပေမဲ့ အဲထဲမှာ ဖြူဖြူထွေးကတော့ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြန်
ပါတယ်။မကြာမှီရက်တစ်ရက်မှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် ပြည်သူတွေအတွက် အအေးဗူးတွေ ထွက်ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့သူမအပေါ်မှာ ချစ်တဲ့အချစ်တွေအစား ဝေဖန်မှုတွေသာ တိုးနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရင်းနဲ့ပဲ ရန်ကုန်မှာဆက်လက်နေထိုင်ရင်း မ ကြာခင်မှာတော့ သူမတို့နေထိုင်တဲ့ နယ်ကိုပဲ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အားလုံးကို လွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကလည်း တင်လာခဲ့ပြီးနောက် အလှူအတန်းဆို ရက်ရောတတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုလေးတွေတော့
အမြဲပြုလုပ်လျက်ရှိပါ တယ်။ သူက တော့ ဒါတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲ ထောက်ပံ့မှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ယခု ဆိုရင် လဲ မြန်မာပြည်မှာ ကိုဗစ် ရောဂါ များ ဖြစ်ပွားနေပြီး အနုပညာ တော်တော်များများလဲ ကိုဗစ် ကူးစက်ခံနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြူဖြူထွေး ဟာ ဆိုရင်လဲ သူ ကိုဗစ်ကူးဆက် ခံ နေရကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောပြလာပါတယ်။ဘယ်တုန်းက ကူးစက်ခဲ့ပြီး ဘယ်လောက်ကြာပီ ဆိုတာကတော့ မပြောပြခဲ့ပါဘူး။မြန်မာ ပြည်တွင်းနေထိုင်ကြတော့မိဘပြည်သူ များလဲ ကိုဗစ်ရောဂါ ဆိုးကြီးက နေ အမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေလို့ ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ကိုဝဖေနျတိုကျခိုကျနတေဲ့သူတှကေို လဈြလြူရှုနိုငျဖို့အတှကျ တရားစကငျြ့နပွေီဆိုတဲ့အကွောငျး အသိပေးပွောကွားလာတဲ့ မျောဒယျလောကရဲ့မိခငျကွီး ဂြှနျလှငျ
အနုပညာသမားတှေ ဒီတဈခါ မှမနာရငျဘယျတော့မှမနာနဲ့တော့ ဒီထကျနာတာမှမရှိတော့ပဲ